कीव मा पर्यटन - एक छुट्टी खर्च गर्न एक महान अवसर
मात्र रूस को बासिन्दा धेरै तर पनि युक्रेन पनि पर्यटक केन्द्रको रूपमा कीव को मूल्य हल्कासित नलिनुहोस्। र तिनीहरू यहाँ नराम्ररी गलत छन्। polutoratysyachny कथा यात्री को ध्यान योग्य भन्दा बढी शहर। त्यहाँ साँच्चै हेर्न कुरा हो, र यो तपाईं कीव मा विशेष पर्यटन मदत गर्नेछ। तर पहिलो, यसको इतिहास बारे एक सानो सिक्नुपर्छ, सबै भन्दा आकर्षण inextricably यो संग जोडिएको छन्।
पहिलो पटक यहाँ आएको गर्नेहरूलाई धेरै, तीन भाइ (किया, चीक र Horeb) र बहिनी (LYBID), एक समयमा शहर स्थापित भएको थियो जो को पौराणिक कथा लागि ज्ञात छ। र केवल शहर को प्राचीन कुँदिएका नाम को नाम मा - Kiya। आधुनिक कीव को Dnieper को embankment मा नातेदार को एक मूर्तिकला मा अतिथि पर्खिरहेका छन्।
तिनीहरूले चिन्ह कीव अन्य शासक बाँकी छ, र। व्लादिमीर को नाम - बप्तिस्मा दिने जस्तै ठाउँमा सम्बन्धित Vudubickiy, समय को कि अवधिमा निर्माण र Vladimirovskaya पहाडी जहाँ आज उहाँलाई एक स्मारक स्थापित छ। कीव एक यात्रा, लायक देखेको।
Yaroslav Mudry पैत्रिक रूपमा बाँकी सेन्ट सोफिया कैथेड्रल, वर्ष को एक नम्बर को लागि सबै को शैक्षिक केन्द्र थियो जो पूर्वी Slavs। साथै, अवधि समावेश जो प्रसिद्ध कीव-Pechersk Lavra र Uspenski गिरजाघर को निर्माण समावेश गर्नुहोस्। यो स्थान नायक इल्या Muromets र यस्ता प्रसिद्ध मान्छे को लागि दफन स्थान भए Yury Dolgoruky, मास्को को संस्थापक छ जो।
पनि लायक उल्लेख, र सेन्ट एन्ड्रयू गरेको चर्च, को 18 औं शताब्दीको वास्तुकला सम्बन्धित। यसको निर्माण लागि विशेष इटाली ले त्यो समय architect Bartolomeo Rastrelli मा प्रसिद्ध निमन्त्रणा गरिएको छ।
माथिको स्थलहरू साथै कीव 1037 मा गोल्डेनगेट लागि प्रसिद्ध छ, 18 औं शताब्दीको Mariinsky दरबार, ओपेरा हाउस र अरूको होस्ट।
उसोभए, तपाईं कीव गर्न भएको कहिल्यै गर्नुभएको छ भने, त्यसपछि तपाईं निश्चित भएको कुनै कम प्रसिद्ध मैदान Nezalezhnosti गर्न प्रसिद्ध Khreshchatyk मा एक पैदल, लिनुपर्छ महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध, क्षेत्र संसारको धेरै देशहरूमा ज्ञात स्मारक, स्थित छ जसको मा स्मारकका जटिल एउटा भ्रमण मा जाने - " मातृभूमि "। यो कीव मा धेरै उपयोगी छुट्टी हो।
साथै, गर्छन् राउन्ड र धेरै कीव संग्रहालयहरु प्राप्त छैन। यो लोक वास्तुकला र जीवनको बाटो देखाउँछ जो असामान्य संग्रहालय "Pirogovo", ध्यान लायक छ। यहाँ तपाईं आफ्नो सबै विविधता मा युक्रेनी रंग कदर हुनेछ, र कीव गर्न पर्यटन, तपाईं पक्कै पनि यो मा मदत गर्नेछ।
साथै, यस हाइड्रो को क्षेत्र मा स्थित छ जो "लघु मा कीव", भ्रमण गर्ने अवसर सम्झना छैन। यहाँ तपाईं को हरेक कुना को सौन्दर्य बुझ्न सक्छ युक्रेनको राजधानी प्रत्यक्ष भ्रमण गर्नुभएको छैन तपाईंसँग ती केही कारणले सहित।
धेरै नातेदार र सहयोगिहरु छोड्न तपाईंले फिर्ती पर्खिरहेका छन् भने, तपाईं बस एन्ड्रयू गरेको मूल मा, हेर्न आवश्यक जहाँ सबै युक्रेन देखि लोक कलाकार को काम गर्दछ। यहाँ तपाईं आफ्नो मालिक को लागि या आफ्नो जवान छोरा वा छोरी अप एक स्मारिका छनोट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं बस विस्मित एक उत्पादन चयन।
स्थानीय सडकमा पनि indescribably शब्दहरूको प्राकृतिक सुन्दरता। को गोलियां सबैतिर ब्लूम गर्दा र मोमबत्ती धेरै पेड सजाउनु विशेष गरी यहाँ लेट वसन्त, सुन्दर। तर शहर सुन्दर र रंगीन पत्ते छ, र midday गर्मी, र हिउँ ढाकिएको। जब तपाईँले NT आएको, तपाईं सधैं पराउँछु केही पाउनुहुनेछ। मुख्य कुरा मात्र अल्छी छैन र आफ्नो जीवन मा एक विशाल विविधता ल्याउने कीव मा गर्न कुराहरू।
त्यसैले तपाईं छुट्टी को स्थान परिभाषित अर्को समय, तपाईंको सेवा सधैं कीव एक यात्रा हो कि सम्झना। यहाँ, तपाईं कहिल्यै पट्टाइ हुनेछ, र आकर्षण छैन पनि छुट्टीको लागि एक दिनको लागि पर्याप्त छ, र छैन। र कम्तिमा एक पटक यहाँ आउँदै, तपाईं, राजधानी शहर संग प्रेम पर्नु हुनेछ यसको अद्वितीय सौन्दर्य आनन्द र यो एक लामो समय को लागि यो संग भागमा सक्षम हुने छैन। कीव मा विशेष पर्यटन तपाईंले व्यक्तिगत तवरमा यो प्रमाणित गर्न मद्दत गर्नेछ।
को कैस्पियन सागर मा अजरबैजान (फोटो) को रिसोर्ट्स
प्राग - चेक गणतन्त्र को राजधानी। इतिहास, प्राग आकर्षण
TC "पाप्रो": मेट्रो स्टेशन "Bagrationovskaya" आफ्नो ठाँउहरु छ
बाली, Seminyak - धनी लागि रिसोर्ट। विवरण र समीक्षा
Volokolamsk राजमार्ग - Volokolamsk गर्न सडक
किनारा Amphoras छुट्टी Resort5- एक अविस्मरणीय छुट्टी
हामी कलिनिन्ग्राद मा छुट्टी मा जानुहोस्। रेस्टुरेन्ट "हर्कुलेसक्लस्टर", "ट्रेन"
महिला सौन्दर्य तेल मेवा गार्ड
Sergeyevka, ओडेसा क्षेत्र। स्वास्थ्य रिसोर्ट्स
बच्चाहरु को लागि क्लब "जानुहोस्" - मजा, रोचक, रोमाञ्चक!
वाइफाइ प्रत्यक्ष के हो? Samsung - वाइफाइ प्रत्यक्ष
1,2र3विभाग ईन्जिनियरहरु। Assigning विभाग इन्जिनियर
तयारी "Niacin"। प्रयोगको लागि निर्देशन
रोटी को प्रकारका के हुन्?
Otitis लागि के प्रयोग एन्टिबायोटिक?
जनावरहरूको माइग्रेसन: उदाहरणहरू कारण, प्रकार। जनावर किन माइग्रेसन गर्छन्?
स्विस घडी ब्रान्डहरु दर्जा। सबै भन्दा राम्रो स्विस हेर्छ